Miyuu macalinka yahay dhibaatada kaliya ee heysata kooxda Milan? Waxaa ka jawaabaya Kaká – Gool FM
(Milan) 15 Okt 2019. Xiddigii hore kooxda AC Milan iyo xulka qaranka Brazil ee Ricardo Kaká ayaa taageera buuxda siiyay macalinka cusub Rossoneri ee Stefano Pioli.
Dhinaca kale Ricardo Kaká ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in kooxdiisii hore ee AC Milan ay horumar sameyn doonto xilliyada soo aadan, la shaqeynta macalinkooda cusub ee Stefano Pioli.
Kaka ayaa sheegay inuu weli jecel yahay AC Milan isla markaana uu u rajeynayo wanaag xilliyada soo aadan, wuxuuna carabka ku adkeeyay inaysan jirin wax uu u sameyn karo xilligan, aan ka aheyn inuu si niyad ah u taageero kooxda.
Xiddiga reer Brazil ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay xaalada kooxdiisii hore ee AC Milan wuxuuna yiri:
“Aynu aragno, Stefano Pioli hadda ayuu kooxda yimid, waxaana rajeyneynaa in Milan ay horumar ka sameyn doonto la shaqeyntiisa”.
“Ka taageera ahaan AC Milan, waxaan kaliya awoodaa inaan u rajeeyo kooxda inay markale dib ugu soo laabato wadada saxda ah xilli ciyaareedkan, waxaan u rajeynayaa macalinka cuub ee Stefano Pioli nasiib wacan”.
Intaas kaddib Ricardo Kaká ayaa la weydiiyay su’aal ah Miyuu macalinka yahay dhibaatada kaliya ee heysata kooxda Milan? Wuxuuna ku jawaab celiyay:
“Way adag tahay in laga hadlo arrimahaas, marka aadan la joogin kooxda, sidoo kale marka aadan ku sugneyn maalinba maalintaa ka dambeysa, laakiin waa mid ka mid ah dhibaatooyinka jira ee haatan la xaliyay sida aan ka aragno kooxda”.
“Marka aadan kooxda la joogin, sida aan sheegay, ma heli karo macluumaad igu filan si aan arintan u go’aamiyo, laakiin taageera ahaan kooxda AC Milan, waxa kaliya aan dhihi karo ayaa ah inaan rajeynayo in arrimuhu ay ku soo laaban doonaan wadada saxda ah wixii xilligaan ka dambeeya”.